Banyere Anyị - Airpull (Shanghai) Iyo Co., Ltd
Malitere na 1996, Airpull (Shanghai) Myọcha ka ebe matured n'ime a definitive emeputa nke ikuku Compressor nzacha. Dị ka a hi-tech Chinese enterprise na a n'oge a oge, anyị ụlọ ọrụ egosiwo a ọkachamara nka maka imewe, mmepụta, na nkesa. Anyị na-enye a dịgasị iche iche nke ikuku Compressor akụkụ ndochi gụnyere elu-ọkwa mmiri dị ka ikuku nzacha, mmanụ nzacha, na ikuku mmanụ separators. Ndị a na ngwaahịa na-kpọmkwem iji dakọtara na a maara nke ọma ụdị ndị dị otú ahụ dị ka Atlas Copco, Kaeser, Ingersoll Rand, Compair, Sullair na Fusheng. Ke adianade ikuku Compressor nzacha, anyị nwekwara ike-emepụta haịdrọlik mmanụ nzacha na ụgbọala nzacha anyị ahịa.
Anyị kachasị azụmahịa ọrụ n'elu ikpo okwu na-agụnye a emeri na management usoro na prioritizes ọhụrụ, ijikọ ụwa ọnụ, na ahịa na-elekọta. The ụlọ ọrụ nlereanya ka mmadụ akụ management e mere na-akwalite uto nke onye talent. Anyị na-agba nọgide mmụta na anya ndokwa ihe na nzukọ ọmụmụ. Anyị maara oru mkpara e ọma gụrụ akwụkwọ na àgwà nkwa usoro.
Dị ka ihe na akwado nke gburugburu ebe obibi-echebe ma na a kpọrọ "Green Enterprise", anyị ẹkenam Airpull (Shanghai) Myọcha igba maka eco-enyi na enyi na ume oru oma ngwaahịa. All nyo ihe iso nke adịchaghị HV iko-eriri nyo akwụkwọ, dị si United States na Germany. The American na German mkpụrụ maximizes nzacha arụmọrụ iji belata ọrụ na-akwụ ụgwọ mgbe inyịme nwere ọrụ ndụ nke ikuku compressors. Advanced mmepụta ngwá na nụchara anụcha n'ichepụta usoro nwere kwere ka anyị nweta kwa afọ mmepụta ike nke 600 puku nkeji. The ISO9001: 2008 Quality Management System bụ na mmetụta.
Na Shanghai dị ka anyị na isi-nke-arụmọrụ, anyị mbupụ ụwa n'ógbè gụnyere Europe, South America, South-East Asia, na Middle East, wdg Anyị nwere a ẹkedọhọde nkesa na Thailand na obodo mmadụ na mba ndị dị ka Iran na Pakistan. Domestically, anyị na-ejere netwọk na-enye zuru mkpuchi mba.
Na 1996, anyị malitere n'ichepụta nyo cartridges maka atọ quintessential akpakanamde nzacha.
Na 2002, anyị akporo nke iche iche gbasaa ịgụnye nzacha maka ịghasa ikuku compressors.
Na 2008, a ọhụrụ ụlọ mmepụta ihe wuru. Anyị ụlọ ọrụ ghọrọ aha n'okpuru aha Airpull (Shanghai) Myọcha.
Na 2010, anyị guzosie ike itieutom ke emeri na ọnọdụ ndị dị otú dị ka Chengdu, XI'an, na Baotou.
Na 2012, BSC arụmọrụ management usoro e emejuputa atumatu. Nke a mmegharị irè akụnye ọhụrụ technology si ma anụ ụlọ na ndị mba ọzọ na isi mmalite n'ime anyị nnọọ olu.
Site 2012 ka 2014, anyị zuru ụwa ọnụ ahịa kemgbe akatara, na anyị na-ọma gara Hannover Messe na Germany na PCVExpo na Russia.